Miroborobo ny fiainana entana - Hiroborobo Best mandry maina Sakafo
Ny fihinanana tsara dia zavatra ezahan'ny olona atao ankehitriny. Satria te-hihinana sakafo ara-pahasalamana dia tsy midika manana fotoana bebe kokoa. Hitanao ny tenanao mitady sakafo hariva hevitra, izay ahitana ny fomba fanamboarana haingana izay salama foana. Mora ny mahita sakafo tianao hatao imbetsaka.
Na inona na inona karazana sakafo tianao hanina, afaka mahita hevitra momba ny sakafo hifanaraka amin'ny filanao ianao. Misy ny zava-drehetra, avy amin'ny sakafo haingana hahazoana sakafo eo ambony latabatra ka hatramin'ny voankazo mahasalama, tsakitsaky sns. Ny hany ilainao dia ny manapa-kevitra hoe iza amin'ireo no tianao hanandrana voalohany.
Azonao atao mihitsy aza ny mahita hevitra sakafo hariva ho an'ny vegetarian. Betsaka ny sakafo mahasalama tsara azo isafidianana; na ireo tia hena aza dia afaka misafidy ny hanandrana ireny sakafo ireny tsindraindray. Tsara kokoa, satria ny sakafo maro dia ahitana hena sy proteinina, sakafo katsaka, vary fotsy avy hatrany ovy tapa-kazo sns. manome famintinana fohifohy momba izay ilain'ny vokatra mivoatra.
Voaroy mifangaro (frezy, manga sy voaroy)
Marina, izay fangaro voankazo azo afangaro mora dia tena tsara. Ireo voaroy ireo dia loharano tsara amin'ny fibre sy antioxidants. Ho fanamorana, Azonao atao mihitsy aza ny mividy kitapo lehibe misy voankazo mangatsiaka ary alao ny ampahany ilaina amin'ny maraina ary tokony ho vonona hohanina izy ireo ny tolakandro..
Ny karaoty dia loharano tsara amin'ny fibre sy vitamin A. Ny fiakanjo ao amin'ny toeram-piompiana maivana dia azo antoka fa tsy mahasalama toy ny fihinanana karaoty, fa vola kely ihany no manome an'io fanampim-panazavana io mba hijerena azy “matsiro” “. Ho any amin'ny toeram-piompiana maivana aho satria, raha ny hevitro, ny ranch tsy misy matavy dia manana tsiro mahatsiravina … tazomy fotsiny 2 tablespoons na latsaka.
Ny poivre maitso dia sakafo matsiro tsara, manome loharano fibre tsara ary ny saosy sasany ao an-trano dia manampy tsiro tsy misy fiantraikany ratsy. Tazony fotsiny ny saosy / saosy to 2 tablespoons na latsaka.
Ny kôkômbra dia manome fahafaham-po ny faniriana mafy sy loharanon-vitaminina tsara. Andramo hummus miaraka amin'ny zing fanampiny, toy ny dill hummus, mba hanome fahafaham-po ny faniriana masira.
Sakafo tonga lafatra ho an'ny natiora izany. Atody akoho, izay lanin’ny olona matetika, dia feno proteinina sy choline, izay manan-danja amin'ny famokarana asidra amino tena ilaina. Misy vitamina maromaro izy io, toy ny vitaminina A, B2, B6, B9 sy B12, ary mineraly toy ny calcium, phosphore sy potasioma. Ny tamenak'atody dia misy vitaminina A rehetra, D sy E. Rehefa mihinana manta ny atody, manome hery sy hery ny vatana.
Voamaina toy ny vary, vary hordea, Ny varimbazaha sy ny katsaka dia foto-tsakafo any amin'ny firenena maro. Izy ireo dia sokajiana ho voamadinika ary izy ireo no vokatra manan-danja indrindra eran-tany, misy proteinina be dia be. Ny oats dia voamadinika tena manankarena proteinina. Ny sakafo avy amin'ny aviavy dia tsara indrindra amin'ny sakafo maraina satria manome angovo ampy ho an'ny andro.
Salama amin'ny ankapobeny ny voanjo rehefa manta. Maro ny voanjo no loharano tsara amin'ny vitamin B2, E ary misy soritra mineraly toy ny magnesium, phosphore, varahina sy potasioma. Be proteinina indrindra ny voanjo manta, asidra folika sy fibre. Walnuts, raha tsy masaka, dia heverina ho salama indrindra, misy antioxidant avo roa heny noho ny voanjo hafa.
Tena sarobidy ho an’ny olombelona ny voankazo satria loharanon-drano sy fibre tsara. Loharanon’ny vitamina C voajanahary koa izy io. Be proteinina koa ny ankamaroan’ny voankazo, anisan'izany ny akondro, paoma, melon, manga, paiso, voasary, serizy, jackfruit sy oliva. Mba hampitomboana ny vatanao amin'ny proteinina, azonao ampidirina ao anaty sakafo ireo voankazo ireo. Ny fitsakoana ny sasany amin'ireo voankazo ireo ho an'ny tsakitsaky dia hanome anao tosika proteinina ara-pahasalamana ihany koa.
Be proteinina amin'ny ankapobeny ny legioma misy ravina, ambany matavy ary ambany kaloria. Misy vitamina C koa izy ireo, lutein, karotenoida, asidra folika sy vitamin K. Manankarena kalsioma izy ireo, vy sy fibre sakafo. Ny legioma be proteinina dia ahitana epinara, broccoli, kale sy letisia.
Ny cookies dia hanampy amin'ny fahafaham-po amin'ity faniriana gliosida ity. Ny cookies voamaina manontolo dia misy fibre sy antioxidants. Ankoatra ny tombontsoa azo avy amin'ny vitaminina sy proteinina amin'ny vokatra vita amin'ny ronono, ny fromazy dia hahatonga anao ho afa-po ela kokoa ary hisakana anao tsy hihinana matetika.
Edamame dia loharano tsara amin'ny fibre sy proteinina. Tokony ho hitanao ao amin'ny nosy sakafo mangatsiaka ao amin'ny fivarotana lehibe izy ireo. Atsofohy ary hosory ny kitapo sandwich feno ary hanina ho sakafo maivana. Mba hanitra kely kokoa, asio sira an-dranomasina kely ary ahetsiketsika ao anaty kitapo.
Almond sy voaloboka
Io no fangaro tonga lafatra amin'ny mamy sy mamy / masira. Misy tavy ny almonds, fa matavy tsara. Loharanon’ny fibre tsara ny voaloboka. Andramo asiana sira an-dranomasina kely fotsiny mba hanampiana tsiro fanampiny amin'ny amandy.
Cheese Monterey voatoto
Mazava ho azy, ity snack ity dia misy fatiantoka maro (matavy, kolesterola, ny sodium), fa ny fatrany dia kely ary ny proteinina dia hanome fahafaham-po anao ela kokoa mba hisorohana ny faniriana ho avy. Sakafo mahasalama izany raha oharina amin'ny kitapo Doritos.
Loharanon’ny fibre sy vitamina C ny paoma. Andramo ny mitazona ny hoditry ny paoma satria be dia be ny vitaminina C. Ny dibera voanjo dia manana proteinina be dia be izay mitazona azy ela kokoa. Tazony fotsiny fa tsy mihoatra 1-2 tablespoons.
Ready to become a Thrive Life consultant? Tsindrio eto raha hiaraka na hianatra bebe kokoa momba ny komisiona sytombony azo avy amin'ny vola tsindrio eto. Azonao atao koa ny miantsena ny anaymangatsiaka sy mahavelona ny vokatra maina eto na amin'ny fiverenana any amin'ny pejin-tranontsika sy hianarana bebe kokoa mombaMiroborobo amin'ny sakafo matsiro.